Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 17)
Ndepụta ndepụta nke ekwentị Xiaomi dakọtara na MIUI 10
Zute ndepụta ekpughere nke ụlọ ọrụ ekwenti ekwuputala na ekwentị mkpanaaka MIUI 10, yana ndị ga-adaba na njedebe nke June na July.
Microsoft ga ewepu Groove Music ngwa na Storelọ Ahịa Play
Microsoft ga - ewepu na Playlọ Ahịa Play, ngwa Groove Music nke anyị nwere ike iji nweta egwu echekwara na OneDrive.
Ekwenye na Galaxy S10 ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo
Dabere na asịrị ndị ọhụrụ na-abịa site na Korea, Galaxy S10 na-agbakwunye ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo ahụ.
A na-egosi Oppo Find X nke Oppo gosipụtara
Oppo mechara mee ka ngosipụta nke ọkọlọtọ ya na-esote, Oppo Find X ga-abịa n'oge na-adịghị anya
Leaked posta na-akwado mwepụta nke Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite
Galaxy A9 Star & A9 Star Lite: Kwadoro igba egbe na China. Choputa ihe banyere igwe ohuru nke akara Korea nke ikwuputa ulo oru ya na China site na posta.
Mwepụta nke 9 Galaxy Note ga-egbu oge izu ole na ole
A imewe mgbanwe na-egbu oge na mwepụta nke Galaxy Cheta 9. Chọpụta ihe banyere a imewe mgbanwe ika ika elu-ọgwụgwụ nso, nke na-akpata ya igba egbe na-egbu oge site izu abụọ.
Samsung Gear S3 na-enweta mmelite ọhụrụ nke na-enye anyị ohere ịza oku site na ịgbanye okpueze
Mmelite kachasị ọhụrụ na Samsung Gear S3 na-enye anyị ohere ịza oku anyị natara na smartwatch anyị site na ịtụgharị okpueze.
Ejiri foto dị mfe nke onye nwe ya mechie OnePlus 6
Usoro ihu ihu nke OnePlus 6 dị njọ dị ka ndị niile ejikọtara ugbu a n'ọtụtụ gam akporo gam akporo, ebe enwere ike ịmeghe ya na foto.
Xiaomi na-ere ahịa ya okpukpu abụọ na nkeji iri na ise nke afọ 2018. Chọpụta ihe banyere mgbanwe nke ire ere ndị China na nkeji iri na ise nke afọ a, bụ nke rurula ahịa ha okpukpu abụọ ma bụrụ ndị na-ere ahịa nke anọ.
Ekwenyela HTC Desire 12 + maka Spain. Mara ọnụ ahịa ya na nnweta ya!
HTC Desire 12 + dị site na taa na Spain maka ọnụahịa dịka uru ọ na-enye anyị si dị. Anyị na-ewetara gị ya!
Motorola Otu Ike: Ejiri ekwentị gam akporo ekwentị ọhụrụ
Motorola Otu Ike: Ekwentị ọhụrụ ya na gam akporo Otu. Chọpụta karịa maka ngwaọrụ ọhụrụ nke ika ga-eji ụdị sistemụ arụmọrụ a.
OnePlus agaghị ebido igwe dị n'etiti ma ọ dịkarịa ala 2021
OnePlus ga-aga n'ihu ịkụ nzọ na njedebe dị elu n'afọ ndị na-abịanụ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke na-agaghị ebido igwe n'etiti etiti n'oge ahụ.
Ndị mmepe PUBG gbara akwụkwọ Epic Games (Fornite) maka imebi iwu
Onye mmepe Korea nke PUBG gbara onye nrụpụta Epic Games akwụkwọ maka ịdepụtacha ihe egwuregwu ahụ.
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi MI 8 SE: Akuko izipu nke mbu. Chọpụta ihe banyere etiti a nke na-ekwe nkwa ịbụ mkpụmkpụ nke njedebe dị elu ma na anyị nwere ike ịma ọkwa echi.
iVoomi i2: ulo oru ohuru ohuru nke ulo oru China bidoro
Gaa na iVoomi i2, ekwentị mkpanaaka dị ala nke pụtara n'oge na-adịbeghị anya na India na ọnụ ọnụ ọnụ, nke anyị ga-ekwu maka nke na-esote. Na mgbakwunye, anyị ga-enyocha njirimara niile na njirimara teknụzụ nke ngwaọrụ a. Nọgide na-agụ!
Nyochaa Bluboo D5 PRO, nnukwu ndakpọ olileanya !!
N'ebe a, anyị hapụrụ gị nyocha vidiyo zuru ezu nke Bluboo D5 PRO, nyocha vidiyo na echiche na-enweghị mwepụ ire nke anyị na-agwa gị ihe ọma niile na ihe ọjọọ niile gbasara ọdụ gam akporo gam akporo a.
Samsung Galaxy S9 Obere leaked on video
A video leaks na imewe nke Galaxy S9 Obere. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ Samsung, nke a na-atụ anya ịba ahịa na afọ a.
Nkọwapụta nkọwapụta nke Honor 9i, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-esote
Honor 9i emelitere emelitere. Na nso nso a na TENAA, Honor LLD-AL20 na LLD-AL30 igwe - aha igodo. Ha abanyela na nchekwa data nke saịtị ahụ na enweghị uru ndị a na-apụghị ịkọwa akọwa na-enweghị obi abụọ na-adọta uche. E wepụtara ngwaọrụ a na peeji nke mbipụta abụọ.
Xiaomi Redmi 6 Pro: nkọwa na leaked atụmatụ nke ika ọzọ mobile
Xiaomi di na oku ozo. Oge a, ọ dị ka ụlọ ọrụ Asia nwere ihe ịga nke ọma nwere Xiaomi Redmi 6 Pro dị njikere maka anyị.
Xiaomi Mi 8: Leaked photos of its design, igbe na animojis na-enen
Xiaomi Mi 8: Kere, igbe na animojis leaked tupu ya igba egbe. Choputa ihe banyere akara di elu nke akara ahia ndi China nke etinyegoro otutu data tupu ya abata na ahia.
New oyiyi nke Moto Z3 Play na-leaked
Ajuputara onyonyo ohuru nke Motorola Moto Z3 Play. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru ohuru, ihe onyonyo mbu ya.
A na-ere Nokia X6 ọzọ na ire ere ọhụụ
Nokia X6 na-ere na ire ere ọhụrụ ya na China. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma ekwentị nwere na ya igba egbe na China.
A na-ebido Vivo Z1 na China ka ọ dị n'etiti etiti. Mara ya!
Vivo na-ewetara anyị Vivo Z1, mpaghara ọhụụ ọhụrụ ya nke bụbu akụkụ nke ụlọ ahịa ụlọ ọrụ nwere ọnụahịa kwekọrọ na ihe ọ kwere nkwa. Ngwaọrụ a na-abịa na imepụta nke na-echetara anyị Apple iPhone X, flagship nke ụlọ ọrụ America ugbu a. Anyị na-agbasawanye gị!
Kagbuo ekwentị dị mkpa 2 kpamkpam
A kagbuola mwepụta nke ekwentị dị mkpa 2. Chọpụta karịa ihe kpatara na ụlọ ọrụ ahụ agaghị ebupụta ekwentị na ahịa, dị ka Andy Rubin si kwuo.
Samsung nyere iwu ka ọ kwụọ nde 539 i toomi Apple
Samsung ga-akwụ Apple $ 539 nde. Chọpụta karịa maka mma ụlọ ọrụ Korea natara maka i copomi ihe mbido iPhone mbụ.
Bixby ga-adị na ngwaahịa Samsung niile na 2020
Ngwa Samsung niile ga - eji Bixby na afọ 2020. Chọpụta karịa maka ebumnuche ebumnuche nke ụlọ ọrụ Korea maka ngwaahịa ya iji ọkachamara.
Nyochaa Aermoo M1
Zute Aermoo M1, ezigbo "ihe niile" na asambodo IP68, igwefoto 21 Mpx, nchedo ujo, ikuku ikuku na nnukwu batrị 5580 mAh
Xiaomi na Apple na-achịkwa ahịa ejiji
Xiaomi na Apple na-agbasi mbọ ike maka idu ndú n’ahịa a na-eyi uwe. Chọpụta karịa ahịa nke ika na nke a nke elekere smart na ọla aka, nke na-aga n'ihu na-eto.
Otu ebubo Xiaomi Redmi 6 na-akwụ ụgwọ na TENAA
Ekwuputala Xiaomi Redmi 6 ebubo tinyere ọtụtụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya na weebụsaịtị TENAA. Ngwaọrụ a ga - aga nke ọma na Redmi 5, otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama n'etiti ụlọ ọrụ China taa. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi Mi 8 gbara ọkụ tupu o gosi ya
Xiaomi Mi 8-akpọburu Mi 7 ka amaburu na Weibo yana ọtụtụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ tupu ya amalite na ụbọchị ole na ole sochirinụ nke ga-eme na China. Anyị na-eme ka ị mara!
Xiaomi kwadoro na a gaghị enwe Xiaomi Mi 7
Kwadoro: A gaghị enwe Xiaomi Mi 7, naanị Mi 8 ka a ga-ewepụta.
LG weputara LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 na X2 na June
LG ga-ebido LG V35, X5 na X2 na South Korea na June. Chọpụta ihe banyere igwe ndị nrụpụta na-ezube ịmalite n'obodo gị n'ọnwa Juun.
Qualcomm Snapdragon 710: Nhazi usoro ohuru. Chọpụta karịa maka ihe nhazi ọhụụ nke akara ahụ amalitewala maka etiti ya.
RUMOR: Sony nwere ike ịkwụsị ịme smartphones. Chọpụta ihe banyere ozi a nke nwere ike ịpụta na akara ndị Japan na-akwụsị imepụta ekwentị mkpanaaka.
Nke a bụ ụbọchị gọọmentị nke ngosi nke ekwentị Vivo Apex na-esote ya na ihuenyo zuru na mkpịsị aka mkpịsị aka na ihuenyo ahụ.
Meizu M6T pụtara na Geekbench na SpCtrumrum SoC
Meizu M6T emeela ngosi na nso nso a na Geekbench nchekwa data, otu n'ime akara ama ama ama ama n'akụkụ AnTuTu. A ga-agbanye ọnụ a, dị ka ndetu enyere, site na ihe nhazi nke ụlọ ọrụ Spreadtrum ... Anyị na-ekwu maka SC9850.
Twitter maka gam akporo TV ga-akwụsị ịrụ ọrụ echi
Na Mee 24, ngwa Twitter maka gam akporo TV ga-akwụsị ịrụ ọrụ wee pụọ na ngwa ngwa nke ngwaọrụ dakọtara.
MediaTek Helio P22: Nhazi usoro ohuru ohuru
Helio P22: Ihe oru ohuru MediaTek maka etiti. Chọpụtakwuo ihe nhazi ọhụrụ nke akara ndị China na-eweta maka etiti, akụkụ na-eto eto.
Nnukwu onye South Korea LG ka gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya na LG Q7 ga-abata na mpaghara Spanish, na, ọ bụ ezie na ọ kpugheghị ụbọchị anyị ga-ahụ nke ọhụụ ọhụrụ a gosipụtara ụnyaahụ, anyị nwere ozi gbasara ọ bụghị ọnụ ala ọnụahịa na nke a ga-akọwapụta.
OUKITEL U18, ihe ngosi ihuenyo niile nwere "Notch" dị elu karịa ụdị iPhone X kachasị dị ọcha, nke pụtakwara maka 4 GB RAM, ebe nchekwa 64 GB na batrị 4000 mAh. Anyị na-agwa gị njirimara ya, ọnụahịa ya ma ọ bụrụ na ọ bara uru n'ezie.
Ahịa Lenovo na-aga n'ihu na-adawanye na China
Lenovo na-anọchite anya naanị 0,4% nke ahịa na China. Chọpụta ihe banyere ala ire ere na China, ebe ọ tụfuru ahịa ya.
Usoro nyocha ihu na-abịakwute Mate 9 na Mate 9 Pro
Mmelite kachasị ọhụrụ nke Huawei Mate 9, Mate 9 Pro na Mate 9 Porsche Design natara na-enye usoro nyocha ihu iji kpọghee ọnụ ya.
HTC U12 +: Ọhụrụ Leaked Atụmatụ na ụdịdị… ya oke oke!
Otu ụbọchị mgbe e gosipụtara ya, a na-enyocha ọnụahịa yana nkọwa nke HTC U12 +, ekwentị ọhụrụ nke ndị Taiwanese ga-eji SD845 SoC kụọ ahịa ahụ, yana ihuenyo dị mma nke na-agaghị enwe anyaụfụ na onye ọ bụla ọzọ, yana agwa ndị ọzọ Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga - eme ka ahịa a wee kwalite.
Nyochaa Fluid + Eagdị Eagle 4K, nke dị elu Igwefoto ihe efu dị elu
Ọ bụrụ na ị na-achọ igwefoto dị mma, dị mma ma dịkwa ọnụ ala, ịnweghị ike ileghara nyocha vidiyo a zuru oke nke igwefoto Fluid +, Igwefoto dị ọnụ ala nke bara uru na ọla edo.
Kwadoro: a ga-ewepụta Xiaomi Mi 8 na Mee 31
Ọ bụ ọrụ: Xiaomi Mi 8 ga-eweta na May 31. Chọpụta ihe banyere ngosi nke ekwentị ọhụrụ site n'aka ndị na-emepụta China nke ga-abịarute emesịa ọnwa a na mmemme mbinye aka.
Ekwentị 10 kachasị ike nke Eprel 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
AnTuTu na-ewetara anyị ndepụta nke ọdụ ike kachasị ike n'ahịa n'ọnwa n'ọnwa, nke, n'oge a, anyị nwere ike ịchọpụta mgbakwunye nke Xiaomi Black Shark, ama ọhụụ gamer ọhụụ malitere ọtụtụ izu gara aga site na ụlọ ọrụ ndị China. Anyị na-agbasawanye gị!
Otu oku vidiyo na WhatsApp na-amalite iru ndị ọrụ
WhatsApp amalite iwebata otu oku vidiyo. Chọpụta ihe banyere njirimara ọhụrụ na-abịa na ngwa ahụ, izu ole na ole mgbe emechara nkwenye ya.
Samsung na-eme ihe ọchị nke iPhone na 'Batterygate' na mgbasa ozi ọhụụ ya
Samsung weputara ozi ohuru na-eme Apple akaje. Choputa ihe banyere Mgbasa ozi ohuru nke Korea nke eji eme ya aka.
Xiaomi Redmi 5A bụ ekwentị mkpanaaka kachasị ere n'ụwa na March
Xiaomi Redmi 5A bụ nke atọ kachasị ere ekwentị na ụwa niile. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke ekwentị ndị China, nke kacha mma na-ere gam akporo ngwaọrụ.
Fortnite maka gam akporo ga-ewepụta oge okpomọkụ a
Fortnite na-abia na gam akporo igwe nke oge a. Chọpụta ihe banyere mmalite nke egwuregwu ọhụrụ ahụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na-echere. Kwadoro site na Epic Games.
Honor 10 na-ere na ụbọchị mbụ ya na Europe
The Honor 10 agwụla na mbido ya na Europe. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke akara elu nke akara ndị China na-ebido na mbido ya na Europe.
Bixby 2.0 ga-adị ọsọ ọsọ ma ghọta gị nke ọma
Bixby 2.0 ga-agba ọsọ ọsọ ma ghọta onye ọrụ nke ọma. Chọpụta karịa banyere ndozi a ga-ewebata na ụdị ọhụrụ nke onye enyemaka ụlọ ọrụ ga-abata na afọ a.
New leaked nkọwa nke Samsung Galaxy J4 kpughere
Usoro J nke Samsung Galaxy ezinụlọ na-anata Samsung Galaxy J4, onye ọhụụ ọhụụ ga-abata n'oge na-adịghị anya. Kwa ụbọchị, ọ na-apụta ìhè na njedebe ọzọ a ga-abịa, ọ ga-eme ya n'ụzọ enweghị mgbanwe maka njirimara na nkọwapụta nke ngwa ọrụ mkpanaka a.
Samsung nwere ike ree Exynos processors na ZTE
ZTE na okwu izu ịzụta Samsung Exynos processors. Chọpụta ihe ndị ọzọ banyere kọntaktị dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ nwere ike ịbịanye nkwekọrịta maka ịzụta ndị nhazi.
Xiaomi ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya na Mee 31
Xiaomi ga-eweta ngwaahịa ọhụrụ na Mee 31. Chọpụta ihe banyere mmemme ngosi nke akara ika China nke na-akwadebe iwebata ngwaahịa ọhụrụ.
Ọnụ ọgụgụ a na-apụghị imeri emeri nke Pepephone dị na ọnụahịa kacha mma
Nweta ọnụọgụgụ Pepephone na ọnụahịa kacha mma. Chọpụta karịa gbasara nkwalite a nke ị nwere ike nweta ọnụego kachasị mma na data ekwentị 19 GB yana oku na-akparaghị ókè na ọnụahịa kacha mma.
Netflix na HDR ugbu a dakọtara na Sony Xperia XZ2, Huawei P20 na Mate 10 Pro
Xperia XZ2, Huawei P20 na Mate 10 Pro na-akwado Netflix HDR. Chọpụta karịa gbasara ụdị ndị a nwere ike mepụtagharị ọdịnaya ndị a na mkpebi kacha mma.
Enwere ike igosi Nokia 2, 3 na 5 (2018) na Mee 29
Nokia nwere ike igosi Nokia 2, 3 na 5 (2018) na Mee 29. Chọpụta ihe banyere mmemme nke akara ahụ kwadebere maka njedebe nke ọnwa na Russia nke anyị ga-ezute igwe ọhụrụ.
Eziokwu ARCore gbagoro na LG G6, Xperia XZ1 na ọtụtụ ndị ọzọ
ARCore, eziokwu dịwanye elu nke Google ruru ọtụtụ ekwentị. Chọpụta ihe banyere ọganihu nke ụlọ ọrụ na-agbasawanye eziokwu nke na-abịa na ekwentị gam akporo ọhụrụ.
Samsung na-eziga akwụkwọ ịkpọ oku maka mwepụta nke Galaxy J6 na Galaxy J4
Samsung ezigala akwụkwọ ịkpọ òkù maka ngosipụta nke Galaxy J6 na Galaxy J4, chọpụta nkọwa ndị ọzọ n'okpuru.
Achọpụtala Xiaomi E6 na Geekbench
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke Xiaomi E6. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ site na akara China nke na-amaghị ihe ọ bụla na nke pụtaworị na Geekbench,
Nokia X6 bụ ọkwa gọọmentị! Mara ihe niile banyere etiti ọhụrụ a
Zute Nokia X6, nke ọhụrụ dị n'etiti etiti ka egosipụtara na China, nke ahụ ga-adị maka ire ere na ụbọchị ndị na-abịanụ na ọnụahịa kwekọrọ na ihe niile ọ kwere nkwa. Mara ihe omuma ya na njirimara ya!
Elephone ga-emepe ụlọ ọrụ nke ya n'oge ọkọchị a
Elephone na-akwadebe imeghe ụlọ ọrụ nke ya n'oge ọkọchị. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ ndị China ịmalite ịmalite imepụta igwe ha.
Xiaomi abụrụlarị nke atọ kachasị ere ahịa na Spain
Xiaomi abụrụlarị nke atọ kachasị ere ahịa na Spain. Chọpụta ihe banyere uto nke akara ndị China na mba anyị ebe ọ bụrụlarịrị otu n'ime ndị na-ere ahịa kacha mma.
Insta360 ONE Nyocha: Chekwaa ncheta gị na 360º
Anyị na-enyocha ma nwalee igwefoto Insta360 ONE 360º, igwefoto emere maka iPhone na iPad, nke na mgbakwunye na ịrụ ọrụ nke ọma, anyị nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ na Android n'ihi mgbakwunye ngwa ma ọ bụ aghụghọ m na-egosi gị.
E gosipụtara atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke Nokia X6 tupu ngosi ya
A awa ole na ole gara aga, ndị isi àgwà nke Nokia X6 ka edoziworo, ndị ọzọ ụlọ ọrụ ama ga-abịa aka na aka na a notch imewe na àgwà ndị ọzọ na-egosi na ọ dị ka a n'etiti-nso. Anyị na-agbasawanye gị!
Sirin Labs na-ekpughe nkọwa nke Finney, ekwentị izizi ya dabere na Blockchain
Finney bụ ngwaọrụ nwere ikike tozuru oke. Nke a nwere Qualcomm SoC kachasị ọhụrụ ma dị ike, na, na mgbakwunye, ọ na-esonyere ya na ọtụtụ uru ndị ọzọ na-enye ya dị ka nchekwa dị mma iji chekwaa cryptocurrencies anyị. Mara nkọwa na atụmatụ ya!
Anyị na-ewetara gị data mbụ nke Oppo F7 Ntorobịa, ụdị nke Oppo dị elu na AI na igwefoto dị n'ihu maka mma selfies.
Versiondị na-esote nke gam akporo P na-enye anyị ozi gbasara ihe ndị na-abịanụ na ihuenyo mkpọchi, n'ụzọ dị iche karịa ka Pixel 2 launcher na-egosi ya taa.
Anyị amatalarị ekwentị ndị Xiaomi ga-ebupụta na ahịa na 2018 a
Emechara aha ụdị nke Xiaomi ga-amalite na ahịa. Chọpụta karịa gbasara atụmatụ nke akara ndị China onye ekwuputala ekwentị ya.
Filters akwụ ụgwọ ọnụahịa nke OnePlus 6 na mbido ya. Chọpụta karịa gbasara ọnụahịa ekwentị ekwentị ndị China ga-enwe na mbido ya n'ụlọ ahịa n'oge na-adịghị anya.
Xiaomi gbara Coolpad akwụkwọ maka iwu mmebi iwu
Coolpad gbara Xiaomi akwụkwọ maka nnabata patent. Chọpụta ihe banyere ụlọ ikpe ụlọ ọrụ gbara akwụkwọ maka ojiji eji eme ihe na-adịghị mma dị ka Xiaomi na-aga ịpụta n'ihu ọha.
Emeputakwa Nubia V18 na uhie
Emeputara Nubia V18 na agba ohuru ohuru. Chọpụta ihe ndị ọzọ banyere ekwentị ọhụrụ site na ndị na-emepụta China nke a ga-ebido n'oge na-adịghị anya na agba ọbara ọbara.
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke LG Q7
LG Q7: Mbụ ekwentị ụdịdị leaked. Chọpụta ihe gbasara ngwaọrụ ọhụrụ site na ọkwa Q nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ada ahịa n'oge na-adịghị anya.
Motorola na-ebuputa ekwentị mpịakọta na-abanye na mbadamba
Motorola nwere patent maka ekwentị foldable. Chọpụta ihe banyere ika mbụ foldable ekwentị na-a mbadamba na a na-ama aha patent.
Nyochaa Nomu M6
Zute Nomu M6, nke kachasị mma na nke kachasị mma nke dị na ahịa na ọnụahịa ịtụnanya. Ọbụghị “ekwentị rugued” niile bụ otu. Chọpụta njirimara ya, ọnụahịa ya na nkọwa niile nke ekwentị a na-apụ apụ.
Xiaomi na Nokia adịworị n'etiti ndị na-ere ahịa ise kachasị mma na Europe
Chọpụta karịa ọnụọgụ ahịa nke Xiaomi na Nokia na naanị n'ime otu afọ so n'ime ụdị ndị kacha ere na Europe, n'etiti ndị isi ise.
Google ga-eme nche patch amanyere iwu
Google na-eme ka ịnye ihe nchedo dị mkpa. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ọhụrụ ọhụrụ iji kpuchido ọtụtụ ndị ọrụ dị ka o kwere mee.
Nkọwa nkọwapụta nke Vivo X21i dị ka TENAA
Taa, TENAA, onye nyocha na onye njikwa nke China nke a ga-eji kwado ekwentị niile nke ga-ere ahịa na mba ahụ, gosipụtara ọtụtụ àgwà nke Vivo X21i, ngwaọrụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu njirimara na nkọwapụta teknụzụ dị ka X21.
Ngwaahịa ngwa ngwa nke ụlọ Xiaomi na arụnyere Google Assistant
Ngwaọrụ ụlọ nke Xiaomi dakọtara na Google Assistant. Chọpụta karịa gbasara ọkwa a na-abịa mgbe akara ndị China ga-ebupụta ngwaahịa ya na United States.
Google weputara Pixel smartwatch nke odida a
Google na - aru ​​oru na Pixel smartwatch nke gha abia n’onwu. Choputa ihe banyere smartwatch ohuru nke ika a na aru oru ya.
Imelite ekwentị ZTE enweghịzi ike
Ekwentị ZTE nwere ike ịnweta mmelite ugbu a. Chọpụta karịa nsogbu a na-emetụta ndị ọrụ niile na ekwentị ZTE
Blackview BV5800 Pro: ekwentị ụlọ ọrụ ọzọ na-abịanụ ka ga-abịa
Blackview, onye na - ewu igwe na - ebugharị ebugharị, ga - ewepụta ngwaọrụ ọhụụ n’oge na - adịghị anya. Anyị na-ekwu maka Blackview BV5800 Pro, njedebe dị ala na ụfọdụ nkọwa na atụmatụ nke ọkara na-azọ n'etiti etiti ga-adị n'ịntanetị n'izu na-abịa. Anyị na-ewetara gị ya!
Vodafone Otu Light: ego 50% na ọnụego a. Chọpụta karịa gbasara ọnụego ndị ọrụ a na-ejikọ Internetntanetị n'ụlọ, oku ekwentị, data mkpanaka yana oku site na mkpanaka gị, ugbu a na nkwalite.
ZTE na-akwụsị ire mobiles ụwa nwa oge
ZTE hapụrụ ire ekwentị mkpanaaka n'ihi mgbochi America. Chọpụta ihe banyere mkpebi onye nrụpụta nke China na-eweta nsogbu maka ịdị ogologo ndụ ya.
Lenovo weputara ekwenti akara ZUK na June 14
ZUK jiri ekwentị ọhụrụ laghachi na June 14 a. Chọpụta ihe banyere ika nloghachi ahịa eze na ya ọhụrụ na ekwentị na a ga-eze-ekpughe na June.
HOMTOM na-eme ncheta afọ 5th ya na ego ruru $ 50 maka obere oge!
Homtom na-eme emume ncheta afọ ya n’ụdị nwere nnukwu ego ị na - agaghị echefu! Ego ndị Homtom na-enye anyị sitere na US $ 10 na US $ 50 kwa coupon. Nke a metụtara ọtụtụ ngwaọrụ nke anyị nwere Homtom H770, S8, na ndị ọzọ.
Huawei Y3 (2018) nkọwa ekpughere
Huawey Y3 (2018): Ekwentị mbu nke Huawei nwere gam akporo Go. Chọpụta ihe banyere ekwentị izizi China maka iji gam akporo Go.
Ozi niile banyere Google Assistant gosipụtara na Google I / O 2018
Onye enyemaka Google: Akụkọ e gosipụtara na Google I / O 2018. Chọpụta ozi banyere ozi ọma nke onye enyemaka ụlọ ọrụ ga-ewebata n'oge na-adịghị anya. Ha niile gosipụtara na Google I / O 2018.
360 N7, etiti dị iche iche nwere nnukwu batrị 5030mAh
360 Mobiles gosipụtara 360 N7 na China n'ụdị, onye ọhụụ ọhụrụ nke katalọgụ ya nke kpebisiri ike na ngalaba na-ajụ ajụjụ maka njirimara ya na nkọwapụta etiti.
Sharp Aquos R2: Ọhụrụ dị elu na Snapdragon 845 na igwefoto lekwasịrị anya naanị maka vidiyo
Sharp egosiputa Sharp Aquos R2, ihe ohuru nke nwere nkọwa na njirimara nke ihe di elu. Na, ekele ya Qualcomm Snapdragon 845 processor na ihe ndị ọzọ, ama a na-abịa ịlụ ọgụ megide nsogbu nke ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Nkọwa na atụmatụ nke BQ Aquaris X2 ọhụrụ na Aquaris X2 Pro
BQ ụlọ ọrụ Spanish BQ enweworị BQ Aquaris X2 na Aquaris X2 Pro dị njikere maka anyị, ụlọ ọrụ ọhụrụ abụọ dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ nwere ezigbo njirimara na njirimara, yana ike ma dị ịrịba ama. Mara ha!
Oukitel U19: Onye na-esote iPhone X Clone ga-abịa Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 100
Oukitel U19, ọnụ ga-abụ obere ama ama n'ihi atụmatụ ya nke ga-eru ọnụahịa ruru 100 dollar. Dị ka ọ dị na iPhone X na U18, ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela na U19 nwere ngosi ngosi ngosi 5.85-inch.
Ihe ama ama weghaara 34% na China
Ọchịchọ maka ekwentị na China dara na 34%. Chọpụta ihe banyere ọdịda nke ahịa ekwentị na mba na nkeji iri na ise nke afọ.
Xiaomi Mi 7 ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo dịka okwu ya si dị
Companylọ ọrụ China Xiaomi adịghị ezu ike, o yikwara ka anyị enweworị Xiaomi Mi 7 njikere, ọkọlọtọ na-esote nke ga-abata, ọ bụghị na onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ dị ka a na-ahụkarị, kama yana otu n'okpuru ihuenyo dị ka Vivo X21, ekwentị mkpanaaka mbụ nwere njirimara a, na-eburu ya.
Android P agaghị ekwe ka ngwa ndị nledo na njikọ njikọ
Android P ga-egbochi ngwa iji hụ njikọ njikọ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Xiaomi Redmi S2: Nkọwapụta na ọnụahịa leaked na Aliexpress
Xiaomi Redmi S2: Nkọwapụta, ọnụahịa na leaked oyiyi. Chọpụta karịa gbasara ekwentị ọhụrụ sitere na akara ndị China nke amachapụla data ya kpamkpam na Aliexpress.
Vivo Y75s na Vivo Y83 gbara akwụkwọ na TENAA
Vivo Y75s na Vivo Y83: Nkọwa nke etiti etiti ọhụụ. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China a na-aga ịmalite n'oge na-adịghị anya.
Ngwa Google maka gam akporo ga-ewepụta akara ngosi ọhụrụ
Ngwa Google maka gam akporo ga-enwe akara ngosi ọhụụ. Chọpụta karịa banyere mgbanwe a ewebata na akara ngosi nke ngwa Google.
Egwuregwu Pokémon anọ kacha mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke egwuregwu n'ime ewu saga anyị na-ahụ maka ekwentị gam akporo.
Nyocha Facebook na-ebupụta mbipute ad-free site na ndenye aha
Facebook ga-ewepụta mbipute na-anaghị akwụ ụgwọ site na ndenye aha. Chọpụta karịa gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya atụmatụ iji bido ụdị nke akwụrụ ụgwọ.
Adobe Photoshop Express emelitere site na ịgbakwunye ọrụ nlezianya Ele
Ihe ngosi Adobe Photoshop Express editọ nwetara mmelite na-agbakwunye ihe ngosi ọhụrụ nke ụfọdụ ndị ọrụ na-echere ogologo oge: nhazi echiche.
Egwuregwu egwuregwu egwuregwu kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu mmiri anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ egwuregwu a anyị nwere ugbu a maka gam akporo.
The Xiaomi Redmi S2 ga-eweta na May 10
Xiaomi ga-eweta Xiaomi Redmi S2 na Mee 10. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke ekwentị ọhụụ n'etiti si akara ndị China.
1 GB nke data mkpanaka na ọnụahịa kachasị mma maka República Móvil
Chọpụta karịa gbasara nke a Mobile Republic nke na-enye gị 1 GB nke data mkpanaka nke ị nwere ike ịnyagharịa kwa ọnwa na ọnụahịa kachasị mma, nke naanị 3,95 euro. Kpọọ ya ugbu a!
Nkọwapụta leaked nke LG V35 ThinQ: LG V30S ThinQ, ọ bụ gị?
A sụgharịrị ihe dị iche iche nke ihe ga-abụ LG V35 ThinQ. Dabere na asịrị dị iche iche na enyo anyị enyo, dịka a tụrụ anya ya, ọnụ ọgụgụ a ga-abịa na ọtụtụ ndozi na ngalaba akụrụngwa, nke anyị ga-ahụ karịa SoC dị ike karị, yana ndozi ndị ọzọ ruo na igwefoto na batrị ahụ.
Ngwa kacha mma maka ụbọchị nne
N'ime ndepụta a ị nwere ike ịchọta ngwa kachasị mma maka ụbọchị ndị nne, ezumike, ezumike na netwọkụ mmekọrịta.
Njirimara nke ọhụrụ Asus ZenFone Live L1 na gam akporo Go
Kpoo Asus ZenFone Live L1, ụlọ ọrụ gam akporo mbụ nke gam akporo malitere na Indonesia nwere nkọwapụta teknụzụ yana njirimara njirimara nke njedebe dị ala, yana ụfọdụ ndị ọzọ na-agbanye n'etiti. Anyị na-ewetara gị ya!
A ga-enye HTC U12 + na May 23
A ga-ekpughe HTC U12 + na May 23. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke ọkwa ọhụrụ dị elu nke ika Taiwan.
Xiaomi abụrụla nke anọ kachasị mma n'ụwa niile
Xiaomi bụ nke anọ kachasị ere ahịa n'ụwa. Chọpụta karịa ahịa ndị China na nkeji iri na ise nke afọ a.
Facebook F8: Akụkọ niile e mere na ogbako ahụ
Facebook F8: Akụkọ e gosipụtara na ihe omume ahụ. Chọpụta ihe banyere ozi niile ụlọ ọrụ gosipụtara na mmemme a.
Versionsdị abụọ nke Galaxy Note 9 gbaara na China
Ekwenyela nsụgharị abụọ nke Galaxy Note 9 na China. Chọpụta ihe banyere njedebe dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ nke ga-enwe nsụgharị abụọ dị iche iche.
Gam akporo 8.1 Oreo melite kwụsịrị maka Razer ekwentị
Razer Ekwentị melite gam akporo 8.1 Oreo kwụsịtụrụ. Chọpụta ihe banyere ihe ndị mere na update maka ekwentị kwụsịrị mgbe a SIM okpu.
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa mbụ ya na ontali na May 26
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ ya na Milan na Mee 26. Chọpụta ihe gbasara ụlọ ahịa mbụ nke akara ndị China na mba transalpine nke ga-abata na njedebe nke Mee.
Samsung Galaxy A6 (2018) na Galaxy A6 + (2018) Ahịa na Leaked Atụmatụ
Samsung Galaxy A6 (2018) na A6 + (2018) gosipụtara ọnụahịa ha. Tụkwasị na nke ahụ, a tọhapụrụ njirimara na njirimara kachasị ọhụrụ na nkọwapụta teknụzụ nke otu ahụ, na-akwado ma, n'otu oge ahụ, na-agbagha ọtụtụ ndị na-agagharị na weebụ ụbọchị ndị a.
Wepụtara nkọwa ndị mbụ na vidiyo nke Xiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi S2: Nkọwapụta izizi na vidiyo leaked. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China nke a ga-ebido na ahịa n'oge na-adịghị anya.
Huawei P20 Pro bụ ụlọ ọrụ kachasị ere ahịa kachasị elu na Western Europe
Chọpụta karịa ahịa nke Huawei P20 Pro na Western Europe ebe ọ bụrụla ihe ịga nke ọma maka akara ndị China na ahịa.
Coolpad Cool 2, ekwentị ọhụụ etiti si Eshia
Coolpad ka malitere ọgbara ọhụrụ dị n'etiti: Coolpad Cool 2, onye nọchiri anya Coolpad Cool nke amalitere na August 2016 nke jiri 16: 9 ihuenyo, Qualcomm SD652 octacore processor, 4GB RAM, na 32GB nke ROM. Mara ya!
Egwuregwu kacha mma nke hacker maka gam akporo
Anọ egwuregwu kacha mma kacha mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ndị hacker ga-eme ka anyị nwee ezigbo ahụmịhe. Dị na Storelọ Ahịa Play.
Ngwa kacha mma gam akporo maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị
Anọ kachasị mma gam akporo maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị. Chọpụta nhọrọ a nke ngwa gam akporo bụ ezigbo enyemaka maka ndị nwere ọrịa nfụkasị ahụ.
Weghaara ihe oyiyi mbu nke Nokia X
Ihe a haziri nke Nokia X gbara n ’onyonyo izizi ya. Chọpụta ihe gbasara ekwentị ọhụrụ dị n'etiti site na ụlọ ọrụ a ga-ewepụta na Mee.
Opo ohuru A3. Mara njirimara ya na njirimara teknụzụ ya!
Oppo, onye China buru ibu, na-ewebata anyị na onye otu ọhụrụ nọ n'etiti ya: ndị a na-akpọ Oppo A3, ọnụ ọnụ ya na nkọwapụta ya na njiri mara ya dị oke ọnụ ma dị ọnụ ala. N'ime àgwà ndị kachasị pụta ìhè na ngwaọrụ a, anyị na-ahụ nnukwu ihuenyo nke ihe karịrị 6 sentimita asatọ.
Motorola na-atụ anya ire nkeji 30 nke Moto G6
Motorola na-atụ anya ka Moto G6 ree nde 30. Chọpụta ihe banyere atụmanya ahịa nke ụlọ ọrụ maka ekwentị ọhụrụ ya.
Huawei kpughere na ha nwere ikikere 74.326 edenyere aha ha
Huawei nwere ikikere 74.326 edenyere aha ya na ụwa niile. Chọpụta ihe banyere patent nke akara ngosi China nke mebere onwe ya dị ka akara mbata na nyocha na mmepe.
Njirimara na nkọwapụta nke HTC U12 site na Verizon
Ejiri HTC U12 tinyere nkọwa ya na atụmatụ ya na peeji nke onye ọrụ America Verizon. A ga-ekewa ngwaọrụ a dị ka flagship nke ụlọ ọrụ Taiwanese yana nsụgharị ya kachasị ike, HTC U12 Plus (U12 +), ọzọ nke na-enyekwa ọtụtụ ihe iji kwuo.
Enwere ike ịchọta nkọwa nke mbadamba Xiaomi Mi Pad 4
Nkọwapụta teknụzụ dị iche iche na atụmatụ nke mbadamba Xiaomi Mi Pad 4, onye nọchiri Mi Pad 3 nke anyị hụrụ n'afọ gara aga, agbaala. Nke a ga-abịa na ihuenyo chọrọ, yana Qualcomm Snapdragon 660 asatọ isi processor, na ndị ọzọ. Anyị na-agwa gị!
Gam akporo Go ga-abiakwa Samsung mobiles
Samsung ga-arụ ọrụ na ekwentị gam akporo. Chọpụta ihe banyere ehi mmiri a na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebido ngwanrọ dị ala na gam akporo Go.
A na-enyocha Huawei na United States
United States na-enyocha Huawei ugbu a. Chọpụta karịa banyere nyocha na a na-edobe ụlọ ọrụ ahụ na America maka azụmahịa na Iran.
LG G7 ThinQ gafere GeekBench na 4GB RAM na Snapdragon 845
LG dị ka LG G7 ThinQ dị njikere, ama ama ama na-esote nke ụlọ ọrụ South Korea ga-egosi anyị n'oge na-adịghị anya na katalọgụ mkpanaka ya. Ngwaọrụ a agafeela GeekBench, ama ama ama. Anyị na-agbasawanye gị!
Enwere ike igosi Nokia X6 na Eprel 27
A ga-ekpughe Nokia X6 na Eprel 27. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru no n’ime obodo ana enweta na Fraịde.
Spotify na-akwụsị ọnọdụ shuffle ma belata oriri data mkpanaka site na 75%
Firmlọ ọrụ Sweden ahụ bụ Spotify ka kwupụtara ọkwa nke ga-abata na izu ole na ole sochirinụ na nsụgharị Spotify na-akwụghị ụgwọ na otu njedebe nke mmegharị aghara nke egwu pụtara.
HOMTOM Fans Ememme: Jiri ohere mwepu ego na ekwentị HOMTOM
Were uru nke ego na ekwentị HOMTOM na TomTop. Chọpụta karịa gbasara nkwalite ndị a nke ị nwere ike ịzụta nhọrọ nke ekwentị ika na ọnụahịa kacha mma ruo Eprel 30.
Meizu ẹkedori gam akporo Go ekwentị
Meizu ga - ebido ekwentị gam akporo Go n’afọ a. Chọpụta ihe banyere ekwentị dị ala nke akara ndị China ga-amalite na ahịa afọ a.
Wepu ihe zuru ezu nke LG G7 ThinQ
LG G7 ThinQ: Ekwentị e kpam kpam leaked. Chọpụta ihe banyere imewe nke ika ọhụrụ ọhụrụ-elu na-ama na-leaked.
Asus ZenFone Max Pro M1, ọhụrụ aku ufọt ufọt nso nke Taiwanese
Nnukwu onye Taiwan, bụ Asus, na-ewetara anyị Asus ZenFone Max Pro M1, ekwentị mkpanaaka nwere etiti na nkọwapụta na njirimara dị iche iche maka ndị na-ege ntị na-achọkarị mana yana agụụ maka ezigbo ọnụ. Mara njirimara ya na njirimara teknụzụ ya!
Ihe ọhụrụ Meizu trio dị ebe a! Anyị na-ewebata gị Meizu 15, 15 Plus na M15
Nyaahụ, Meizu webatara ụzọ atọ ọgbara ọhụrụ. Anyị na-ekwu maka Meizu 15, Meizu 15 Plus, na M15, a na-akpọkwa Meizu 15 Lite, ụdị kachasị dị nro nke abụọ akpọrọ aha. Mara njirimara teknụzụ niile na njirimara nke ngwaọrụ ndị a!
Onye na-enyere aka Google ga-amata ndị kọntaktị gị bụ ezinụlọ gị
Onye nnyemaaka Google ga-ama nke n'ime kọntaktị gị bụ ezinụlọ gị. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa n'oge na-adịghị anya na enyemaka ụlọ ọrụ nke ga-enyere ha aka ichetara gị ụbọchị ọmụmụ ha.
LG G7 ThinQ ga-enwe bọtịnụ nke ya maka Google Assistant
LG G7 ThinQ ga-enwe bọtịnụ raara onwe ya nye maka Google Assistant. Chọpụta ihe banyere bọtịnụ ga-adị na ekwentị dị elu nke ga-enwe ọtụtụ ama site na ọgụgụ isi.
Njirimara na nkọwa nke Xiaomi Mi 6X dị ka ndepụta ọhụrụ TENAA
TENAA na-ekpughe ndepụta ọhụrụ nke njirimara nke Xiaomi Mi 6X na-akwado ma na-emegide ọtụtụ n'ime ndị anyị maraworị. Ebe etiti a ga-abata na Eprel 25 na-abịanụ site na mmemme ngosi nke ụlọ ọrụ China bụ Xiaomi kwadebere maka anyị.
Leagoo S10, mobile nke na-esonye na katalọgụ nke ụlọ ọrụ ahụ ewepụtara na Global Sources 2018 na Hong Kong
Leagoo ọnọde ya ọzọ flagship, na Leagoo S10, ihe gam akporo mobile na a Mmaji Atọ n'azụ igwefoto na a mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo. Na mgbakwunye, ọ na-ewepụta atụmatụ ya n'ahịa dị ugbu a, yana ntụzịaka ọ ga-ewere na ngalaba azụmaahịa ahụ. Anyị na-agbasawanye gị!
Huawei adịghị ezube ire ndị na-emepụta Kirin ya n'ụdị ndị ọzọ
Huawei agaghị ere ndị na-emepụta Kirin na ụdị ndị ọzọ. Chọpụta karịa mkpebi ụlọ ọrụ na ihe kpatara na ha achọghị iresị ndị nrụpụta ha ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
ZTE nwere ike ịhapụ n'enweghị gam akporo n'ihi mmachi US
ZTE nwere ike hapụ ya gam akporo ikike n'ihi na mbupụ na America. Chọpụta karịa nsogbu ndị ụlọ ọrụ na-eche ihu n'ihi mmachi ya.
AnTuTu na-ewetara anyị ndepụta nke ọnụ ọgụgụ kachasị ike na ahịa kwa ọnwa, nke, n'oge a, anyị nwere ike ịkọba mgbakwunye nke akara ngosi Samsung ọhụrụ abụọ, Galaxy S9 na S9 Plus, smartphones nke oge a.
Nwee 50Mb nke eriri eriri na nkwalite Jazztel ọhụrụ nke na-ewetara anyị ọnụego ya nke ọnụego pụrụ iche maka obere oge. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ichekwa na ụgwọ ekwentị gị, mee ọsọ ọsọ.
Filters àgwà nke Nubia Z18 tupu ya ngosi
Nubia Z18: Wepụtara nkọwa ndị dị na njedebe dị elu. Chọpụta ihe banyere njedebe dị elu nke akara ndị China nke akọwapụtalarị nkọwa ya.
Russia rịọrọ Google ka o wepu Telegram na Playlọ Ahịa Play
Gọọmentị Russia na-eme ihe dị ike iji gbochie ụmụ amaala ya ịga n'ihu na-eji Telegram, ugbu a ha chọrọ ihichapụ ngwa ahụ n'ụlọ ahịa
Movistar si 50 MB Fiber Optic Rate ugbu a na nkwalite
Nweta Movistar si 50 Mb Fiber Optic Rate ugbu a na ọnụahịa pụrụ iche. Chọpụta karịa gbasara nkwalite ọhụụ nke onye ọrụ na-enye anyị ọnụego a na ọnụahịa nkwado pụrụ iche. Mee ọsọ ọsọ!
Samsung na-enyocha ikike ihuenyo niile na ọkwa
Samsung ejirila ihuenyo mara ihe niile. Chọpụta ihe banyere patent ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na-anọchi anya ekwentị na amachaghị.
WhatsApp Plus, ngwa nke na-ezuru ozi gị. Ejila ya!
Zute WhatsApp Plus, ngwa dị egwu na-ezighi ezi nke zuru data gị nke bịara n'ebumnuche nke ịnwe "ọrụ ndị ọzọ", nke gụnyere ohere ịnweta akaụntụ anọ n'otu oge na ngwaọrụ gị. Chọpụta ka ị ghara ịdaba n’ọnyà aghụghọ a!
Xiaomi Mi A1 adịghị na ngwaahịa na India
Xiaomi Mi A1 ka erere na India. Chọpụta ihe banyere njedebe nke ekwentị ekwentị nke pụtara na Xiaomi Mi A2 ga-akụ ụlọ ahịa n'oge na-adịghị anya.
Na-asọpụrụ 10 na-aga site na TENAA ma kpughee nkọwapụta ọrụaka ya
Honor dị ka Honor 10 dị njikere, njedebe ya na-esote nke ga-ada ahịa na ọnwa na-abịa iji ike niile lụọ ọgụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'ihi njirimara ya na nkọwapụta ọrụ ya nke TENAA, onye nchịkwa China na onye nyocha, na-agwa anyị. ekpughere ekpughere. Anyị na-agwa gị!
Ihe oyiyi mbụ nke Xiaomi Mi 6X dị ebe a
Ihe oyiyi mbụ nke Xiaomi Mi 6X dị adị adịworị. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ site na ika China nke a ga-ebido n'oge na-adịghị anya na ahịa ma gosipụta ya na Eprel 25.
Russia na-egbochi Telegram maka ịjụ inyefe igodo nzuzo
Gọọmentị Russia agbasoro iyi egwu ya ma gbochie iji Telegram na mba ahụ, site n'ịjụ inyefe igodo nzuzo.
Wepu ihe oyiyi mbụ nke Nubia Red Devil
Nubia Red Devil: Ihe onyonyo izizi nke ekwentị ika cha cha ugbua abanyegola, yabụ na anyị amatalarị ihe ekwentị ga - egosi. Ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịhụ oke.
Akwụkwọ ọhụrụ gosipụtara nkwalite nke Xiaomi Mi 6X
Ekpugheworị ọkwa mbụ nke Xiaomi Mi 6X. Chọpụta akwụkwọ mmado izizi nke ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China nke a ga-ewepụta na Eprel 25.
Wezugara nkọwa nke Vivo V9 Youth
Vivo V9 Ntorobịa: Leaked ekwentị nkọwa. Chọpụta ihe banyere ekwentị site na akara ndị China nke a na-atụ anya ibute ahịa n'oge na-adịghị anya.
Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi Mi 6X dị ka ngwa ngwa ya
Mụta maka nkọwa teknụzụ nke Xiaomi Mi 6X dị ka ngwa ngwa na-adịbeghị anya nke ekwentị a, yana nkọwapụta nkọwapụta dị iche iche na njirimara nke TENAA wepụtara, onye nchịkwa China na onye nyocha nke ngwaọrụ niile ga-ere ahịa na mba Asia buru ibu. .
Samsung SM-G8850 pụtara na AnTuTu ya na nkọwapụta ya bụ isi
Samsung SM-G8850 dị ugbu a na TENAA tinyere ọtụtụ atụmatụ ya na nkọwapụta isi teknụzụ anyị ga-ekwu maka n'okpuru. N'ime ndị kacha pụta ìhè, anyị na-ahụ isi asatọ Qualcomm Snapdragon 660 processor, Android 8.0 Oreo, na ihuenyo 2.220 x 1.080 p.
Ikea Ikea Trådfri dakọtara na Homelọ Google na Google Assistant
Ikea's Trådfri dakọtara na Google Assistant na Google Home. Chọpụta ihe banyere ndakọrịta nke ndị a bulbs si Swedish ụlọ ọrụ na nnyemaaka.
Red Devil: Nubia na-egwu egwuregwu ga-abata na Eprel 19
Nubia weputara ekwenti ekwensu ya nke di na Eprel 19. Chọpụta ihe banyere ekwentị egwuregwu izizi nke akara ndị China nke a ga-ewepụta n'ihu gị n'izu na-abịa.
Xiaomi ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya na Eprel 25, ikekwe Xiaomi Mi 6X
Xiaomi ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya na Eprel 25. Chọpụta ihe maka atụmatụ ndị China maka ịmebata ngwaọrụ ọhụrụ ya na ọnwa a.
Samsung SM-G8850 dị na TENAA. Ọ ga - abụ Samsung Galaxy S9 Mini?
Na nso nso a Samsung SM-G8850, Samsung Galaxy S9 Mini nwere ike isi na ụlọ ọrụ South Korea, ka gafere. Dabere na TENAA, akụrụngwa a nwere ihe ngosi 5.8 nke anụ ọhịa Super AMOLED na nnukwu QuadHD + mkpebi nke 2.960 x 1.440 pikselụ, na mgbakwunye na njirimara na nkọwa ndị ọzọ mara mma.
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke LG V35 ThinQ
LG V35 ThinQ: Nkọwapụta izizi Leaked. Choputa ihe banyere nkowa mbu nke ohuru ohuru ohuru nke ejirila.
Mara usoro nke ekwentị gam akporo nke ga-adaba na Fortnite!
Fortnite, otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu n'oge a, ekpugherela ndepụta nke ekwentị gam akporo nke ga-adaba na egwuregwu ahụ n'oge ntọhapụ na Plọ Ahịa GooglePlay. Anyị na-eme ka ị mara!
Samsung Galaxy J7 Duo dị na ụlọ ọrụ gọọmentị nke ụlọ ọrụ ahụ
Ndị South Korea guzosiri ike Samsung nwere Samsung Galaxy J7 Duo dị njikere, ekwentị mkpanaaka dị n'etiti etiti akọwapụtara na webụsaịtị gọọmentị nke Samsung India maka ego nke 16.990 rupees. Ngwaọrụ a na - eji usoro na usoro nke njedebe nke usoro J nke a na-emebu. Mara ya!
Nokia 1: Android Go nke ụlọ ọrụ ahụ rutere Spain
Firmlọ ọrụ Finnish nke Nokia, mgbe ha gosipụtara Nokia 1 na Mobile World Congress na Barcelona, ​​na-eweta Spain nke a dị ọnụ ala gam akporo Go mbipụta, sistemụ arụmọrụ dị fechaa nke gam akporo nwere obere ekwentị na akụrụngwa ngwanrọ.
ZTE debara aha Axon 9, Axon 9 Pro na ụdị ndị ọzọ
ZTE debara aha Axon 9 na 9 Pro na otutu ekwentị ndi ozo. Chọpụta ihe banyere ndepụta ekwentị nke akara ahụ edebanyelarị na ọ ga-abata n'ụlọ ahịa na 2018 niile.
The Honor 7C na 7A rutere Spain izu mgbe ha gosipụtara
Honor 7C na Honor 7A rutere, na gọọmentị, na Spain, ọ ga-adị maka ire ere site na ụbọchị ole na ole sochirinụ. Ejiri ngwa abụọ a nwere nkọwa na njirimara yiri ya na izu ole na ole gara aga na China. Anyị na-agbasawanye gị!
Eresịla ụfọdụ ụdị nke Xiaomi Mi 6
Emechiela ọtụtụ ụdị nke Xiaomi Mi 6. Chọpụta ihe banyere ozi a nke pụtara na mbata nke Xiaomi Mi 7 dị nso ugbu a karịa mgbe ọ bụla.
Leaked ọhụrụ oyiyi nke Xiaomi si Black Shark
Ihe oyiyi ọhụrụ nke Xiaomi Black Shark leaked. Chọpụta ihe banyere ekwentị Xiaomi nke na-abịa n'ahịa n'oge na-adịghị anya ma na-ewepụta atụmanya dị ukwuu.
Zọpụtara ndị prototype nke ZTE Iceberg: Ihuenyo na ọkwa abụọ
ZTE Iceberg: Weputara nhazi ahụ na ọkwa abụọ na ihuenyo. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ nke na-eju anya site na ịkụ nzọ na ntanetị abụọ na ihuenyo ya.
Ejirila HTC U12 tinye ya na ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ ya. Ngwaọrụ a ga - abịa nke kachasị mma na Taiwanese, maka nke ọ nwere ọrụ ịkwalite ihe ịga nke ọma nke akara ahụ nwere n'oge kachasị mma. Anyị na-agwa gị!
Samsung Pay na PayPal amalite iwekota na United States
Samsung Pay na PayPal jikọtara na United States. Chọpụta ihe banyere njikọta nke ngwa abụọ ahụ otu afọ mgbe ọkwa ahụ gachara.
Ekwentị Xiaomi abụọ ga - egosipụta Snapdragon 670 dị ka ihe nhazi. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke akara ndị China nke ga-eji ihe nhazi a na ekwentị abụọ n'afọ a.
Huawei ga-amalite mmepụta nke Kirin 980 na nkeji iri na ise a
Huawei ga-amalite mmepụta nke Kirin 980 na nkeji iri na ise a. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ndị nrụpụta China site na iji igwe ọhụụ dị elu.
Mkpa ga-emeziwanye igwefoto nke ekwentị mbụ ya na ekwentị dị mkpa
Ekwentị nke onye nrụpụta ụlọ ọrụ Andy Rubin, ekwentị dị mkpa, na-enweta nkatọ dị ukwuu maka igwe foto ya n'ihi na ogo nke ihe mmetụta ya adịghị mma ka o kwesiri. Mana nke a ga-agbanwe na ekwentị gị ọzọ. Anyị na-agbasawanye gị!
Xiaomi tụrụ anya na ọ gafere nde ekwentị 120 rere na 2018
Xiaomi chọrọ ire nde ekwentị 120 na 2018. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ebumnuche nke ụlọ ọrụ China nke chọrọ ịfefe ahịa a na afọ a.
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma emegharị maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu na-emegharị maka ekwentị gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke egwuregwu ndị ewepụtara na consoles ma dị ugbu a na gam akporo.
Egosiputa ihe mbu nke Honor 10
Sọpụrụ 10 mbụ ụdịdị ekpughere. Chọpụta karịa banyere njedebe ọhụrụ nke akara ndị China nke ebidola ịma ọkwa ya ma anyị nwere nkọwa gọọmentị mbụ.
Otutu ihe oru banyere Samsung Galaxy A6 na-edozi
Mụta maka nkọwa teknụzụ nke Samsung Galaxy A6, ngwaọrụ abụọ nke ụlọ ọrụ South Korea na-akwadeberịrị, yana anyị nwere ike ịhụ na obere oge. Anyị na-enye gị nkọwa!
Pixel 3 na-abanye na koodu gam akporo na mberede
Koodu gam akporo ghapuru Pixel 3. Na-achọpụta ihe ọzọ banyere nkwenye na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Pixel ọhụrụ maka ekele gam akporo.
MásMóvil na-eweta eriri ọhụrụ ya, nke edoziri na nke mkpanaka yana nkwalite ọnụahịa
New eriri, ofu na mobile ọnụego si MásMóvil na nkwalite. Chọpụta karịa gbasara ọnụego ọhụrụ a nke onye ọrụ na-ebupụta ugbu a na nkwalite ọnụahịa maka ọnwa atọ mbụ. Gụkwuo banyere ọnụego ya ma kpaa ya ebe a.
Samsung nwere ike weputa 3 dị iche iche Galaxy J3s na 2018
Samsung ga-ewepụta nsụgharị atọ nke Galaxy J3 afọ a. Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ wepụtara ụdị atọ nke ekwentị dị ala n’afọ a.
Xiaomi Mi 7 nwere ike ịnwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo site n'aka onye isi ya
Xiaomi Mi 7 ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ihuenyo ahụ. Chọpụta ihe banyere ozi ahụ sitere n'aka onye isi ụlọ ọrụ ahụ nke na-ekwu na onye dị elu ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka agbakwunyere n'okpuru ihuenyo ahụ.
Nyochaa Xiaomi Mi Rịba 3
N'ebe a ka m na-ahapụrụ gị, mgbe ụbọchị iri nke iji kpụ ọkụ n'ọnụ gasịrị, nyochaa vidiyo zuru oke na Spanish nke Xiaomi Mi Note 3, njedebe dị elu na ọnụ ala dị ala.
N’abalị iri na itolu nke Eprel, a ga-ewepụta ezinụlọ ọhụrụ Motorola Moto G19
Motorola ekwuputala site na ọkpụkpọ òkù maka mmemme mwepụta nke ga-ewere ọnọdụ na Eprel 19 a na Sao Paulo, Brazil, ọtụtụ ihe ịtụnanya nwere ike ịbụ ngosipụta nke Motorola Moto G6 asịrị ugbua Anyị na-enye gị nkọwa!
Google wepụrụ mmachi na ọnụọgụ nke ngwaọrụ ndị ụlọ ọrụ akwadoghị
Lọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ ewepụla otu njedebe ọ na-etinye na ngwaọrụ ndị na-abụghị ụlọ ọrụ.
A ga-enye Honor 10 na May 15
A ga-ekpughere Honor 10 na May 15. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China nke ga-ada n'ahịa n'oge na-adịghị anya.
Nke a bụ Hisense V +, n'etiti etiti na Snapdragon 660 SoC
Gaa na Hisense V +, ụlọ ọrụ ọhụrụ ekwuputala na nso nso a. Ihe siri ike nke ekwentị a bụ imewe ya, na mgbakwunye na ezigbo akụkụ dị n'ime nke anyị hụrụ mgbawa Qualcomm SD660, 6GB RAM, na ndị ọzọ. Anyị na-ewetara gị ya n'okpuru!
Blackview BV 9000 Pro nyocha
Blackview BV 9000 Pro, nke kachasị mma n'okporo ụzọ nke oge a na nọmba kwesịrị ekwesị nke elu ugwu. A ezigbo "waterproof" na anyị na-etinye ule. Karịa ekwentị rụrụ arụ
A ga-ebido Asus ZenFone 5 na Eprel 12 na Taiwan
Onye Asia bu Asus edebela ubochi oru nke ZenFone 5 maka Taiwan, onu ogugu nke anyi gwaworo gi banyere otutu oge, nke emere na February 27 na ihe omume a. Appointedbọchị a kara aka bụ Eprel 12. Anyị na-agbasawanye gị!
Nzacha mbụ nsụgharị nke HTC U12
Leaked mere atụmatụ nke HTC U12. Choputa ihe banyere otutu ulo oru a ga-ebuputa n’oge opupu ihe ubi a n’ahịa ma nke anyi gha emela
A na-ere Xiaomi Mi Mix 2S na China
Xiaomi Mi Mix 2S zuru oke na ngwaahịa ya na China. Chọpụta ihe banyere ịga nke ọma na ire ahịa ekwentị nke China nke rereworị na ụlọ ahịa na mba gị.
Tarifu Yoigo tarifu: Akpa Mobile Line na Unlimited Data
Chọpụta karịa gbasara ọnụego ọhụrụ onye ọrụ gosipụtara nke na-esetịpụ ụkpụrụ na ahịa mba maka ịnweta data na-akparaghị ókè. Chọrọ ịma ego ole ọ na-eri?
Wepu ihe oyiyi mbụ nke Xiaomi gamer mobile
Ihe oyiyi izizi nke Black Shark nke Xiaomi agbaala. Chọpụta ihe banyere ekwentị gamer nke akara ndị China, nke ihe onyonyo izizi ya bụ eziokwu.
Wuchara nkọwa mbụ banyere Galaxy S9 Mini
Egosiputa ihe ndi mbu banyere Galaxy S9 Mini. Chọpụta ihe banyere ekwentị Samsung ọhụrụ banyere nke akọwapụtara ụfọdụ nkọwa
Google ga - arụ ọrụ na Pixel dị ọnụ ala
Google ga-ebido Pixel dị ọnụ ala karịa n'ahịa a n'afọ a. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke akara ahụ chọrọ ịmalite, nke ga-adị ọnụ ala ma ga-adị n'etiti etiti.
Galaxy A6 na A6 + nwetara asambodo FCC
FCC kwadoro Samsung Galaxy A6 na Galaxy A6 +. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị n'etiti sitere n'aka onye nrụpụta South Korea nke enyerelarịrị akwụkwọ ikike.
Xiao AI: Onye na-enyere Xiaomi aka na ọgụgụ isi dị adị adịworị
Xiao AI: Onye inyeaka nke Xiaomi abụrụla ihe dị na China. Choputa ihe banyere onye enyemaka na - enyere aka nke akara nke China site n’uche ọgụgụ isi nke emegoro n’ihu na China.
Nkọwa na atụmatụ nke Honor 7A, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Anyị na-ewetara gị asọpụrụ 7A yana nkọwa ya niile! Ngwaọrụ a nwere ọtụtụ àgwà na-enye ya njedebe dị ala, n'agbanyeghị na ọkara ụkwụ dị n'etiti etiti n'ihi sistemụ arụmọrụ ọ na-eji, ihuenyo a nabatara nke ọma, batrị na-ebuwanye ibu, na ndị ọzọ. Anyị na-agbasawanye gị!
Nubia Z18 Obere ga-eweta na Eprel 11
Emebere Nubia Z18 Mini na Eprel 11. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke ekwentị ọhụrụ ahụ, nke ga-eme n'ime ihe karịrị otu izu.
Emechara nkọwa nke Xiaomi Mi A2
Nzacha nkọwa zuru ezu nke Xiaomi Mi A2. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ site na ika ndị China iji nwee gam akporo Otu ga-ada ahịa n'oge okpomọkụ a.
Emechara nkọwa mbụ nke Snapdragon 841
Snapdragon 841: Nkọwapụta mbụ leaked. Choputa ihe banyere ihe ohuru ohuru ohuru nke ika a n’atu anya ire ahia n’aho a.
Nkọwapụta, ụbọchị ntọhapụ na ọnụahịa nke Vivo Y71 ka edozichara
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke ekwentị Vivo Y71 dị n'etiti, njirimara ya, ụbọchị mmalite ya na ọnụego ya nwere ike.
Nkọwapụta arụmọrụ n'etiti Galaxy S8 + na Galaxy S9 +
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, akara ngosi ma ọ bụ ule arụmọrụ nke ngwaọrụ ndị ahụ adịghị mkpa, ebe ọ bụ na ...
Xiaomi ga - amalite smartphone na Helio P60 na nkeji nke abụọ
Xiaomi na ekwentị Helio P60 na-arụ ọrụ na nhazi. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke Chinese ika na-aga ẹkedori a ekwentị na MediaTek processor n'ime.
Huawei rụpụtara ekwentị foldable nke ghọrọ mbadamba
Huawei amachibidola ekwentị na-agbanwe agbanwe na mbadamba nkume. Chọpụta ihe banyere patent nke akara ndị China na-arụ ọrụ ugbu a n'ụdị ekwentị a nke kwesịrị ibute ahịa n'oge na-adịghị anya.
Motorola Moto G6 na G6 Play leaked na zuru
Moto G6 na G6 Play: Nkọwapụta, ọnụahịa na imewe leaked. Choputa ihe banyere igwe ohuru ohuru nke aga emeputa n’ahia n’oge n’adighi anya ma nke anyi maraworị imewe ya na nkowa ha.
Meizu na-ebuputa ihe mmetụta mkpịsị aka ọhụrụ maka ekwentị ihuenyo niile
Meizu patents sistemụ akara njirimara ọhụụ. Chọpụta ihe banyere patent ọhụrụ nke ika China nke na-ewebata ụzọ ọhụrụ iji mata akara aka na ihuenyo ekwentị.
Amamịghe echiche nke Huawei P20 ga-abịakwute Mate 10 na Mate 10 Pro
Nwunye 10 na Mate 10 Pro ga-enwe ọgụgụ isi nke Huawei P20. Chọpụta ihe banyere ekwentị ndị dị elu nke ga-enweta ọgụgụ isi a.
Wepụtara nhazi na nkọwa nke Moto Z3 Play
Nzacha nkọwa na imewe nke Moto Z3 Play. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru ohuru nke ana ele anya oru ya n’aho a.
Nkwụ ga-eji ekwentị gam akporo laghachi na ahịa
Nkwụ laghachi na ahịa na 2018 na ekwentị mbụ ya gam akporo. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ na-emegharị ekwentị, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a ọ ga-abụ ngwaọrụ gam akporo.
Anyị nwere ụbọchị iri na anọ iji weghachi ihe ọ bụla zụrụ dijitalụ si Google Play
Na-eme ka iwu European kwekọọ, ụmụ okorobịa na Google agbatịwo oge nlọghachi maka ngwa ma ọ bụ egwuregwu nke anyị zụtara na mbụ.
Nhazi nke LG G7 leaks ọzọ: a kwadoro ọkwa ahụ
Leaked imewe nke LG G7 nke na-egosi na a ga-enwe ọkwa. Chọpụta ihe banyere nhazi nke LG G7 nke agbafuola ọzọ ma gosipụta na njedebe dị elu ga-enwe ọkwa.
Google zụtara Tenor GIFs search engine
Faịlụ dị n'ụdị GIF abụrụla ụzọ kachasịsịsịsị egosipụta iji gosipụta mmetụta uche anyị, mmetụta anyị ... kama nke mmetụta mmụọ na-agwụ ike nke ọtụtụ ndụ anyị.
Moto G6 price na ọhụrụ leaked ụdịdị
VLEAKS na-ewetara anyị nseta ihuenyo nke Moto G6 na Amazon -peji nke a haziri ekwentị a ka ọ bụrụ ntakịrị oge tupu ewepụ ya- nke na-egosi ọtụtụ njirimara ndị ọzọ nke ekwentị a nke ọtụtụ gosipụtara nke anyị nwere. na-eme ka ị mara. Anyị na-egosi gị!
Otu ebubo OnePlus 6 na GeekBench na ndị a bụ njirimara ya
E debere OnePlus 6 na GeekBench, otu n'ime akara ngosi ama ama ama ama na AnTuTu, yana maka uru ọ na-egosi, ọ ga-abịa na uru ndị kwesiri njedebe dị elu na, n'enweghị obere obi abụọ, ga-abịa ebumnuche iji weghara ahịa na ụdịdị dị ike.
Nyochaa ila silk
Nyochaa iLA Silk a smartphone nwere ngosi 5,7 nke anụ ọhịa, 13 - 8 Mpx igwefoto abụọ nwere ọmarịcha atụmatụ nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Ọ bara uru ịzụta? Kedu ihe bụ ike na adịghị ike gị? Chọpụta ya ebe a.
Etu esi hu Huawei ngosi ndu, zute Huawei P20 ohuru, P20 Pro, P20 Lite na ndi ozo
Nke a bụ njikọ kpọmkwem na nkwanye iji hụ ngosipụta nke Huawei bi na Paris, ihe ngosi nke anyị ga-amata ụdị ọhụụ nke usoro P nke ụdị ndị China ama ama. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ndụ ngosi nke Huawei P20 ọhụrụ, P20 Pro na P20 Lite.
Oppo F7, ekwentị ọhụrụ nke akara n'ụdị iPhone X
Oppo wetara anyị F7, ama ama nwere njiri mara na nkọwa dabara adaba nke etiti / ogo nwere njiri mara maka ngalaba na-achọ ihe n’achọghị ihe kacha mma, mana ya na nkwa iji mezuo nkwa ahụ. Anyị na-ewetara gị ya!
Xiaomi Mi Mix 2S agaghị adị ọnụ ala dịka onye isi ụlọ ọrụ Xiaomi kwuru
Onye isi oche nke Xiaomi na-ekwu na Xiaomi Mi Mix 2S agaghị adị ọnụ ala. Chọpụta ihe ọzọ banyere nkwenye a n'aka onye isi ụlọ ọrụ banyere ekwentị nke akara ndị China.
Nzacha mbụ nkọwa nke HTC U12 +
Mbụ HTC U12 + nkọwa leaked. Choputa ihe banyere ohuru ohuru nke ulo oru ndi akukowo ihe omuma ha.
4 ọchịchọ ịmata ngwa maka gam akporo igwe. Chọpụta ngwa izizi ndị a ị nwere ike ibudata ugbu a na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Ndị ọrụ nwere nnukwu ihuenyo na-eji mkpanaka ha ogologo oge
Ndị ọrụ nwere nnukwu ihu na-eji ekwentị mkpanaaka maka ogologo oge. Chọpụta ihe banyere ọmụmụ a na-egosi mmekọrịta dị n'etiti iji ihuenyo na oge onye ọrụ na-etinye n'iji ekwentị.
HTC U12 + ga-abụ naanị HTC dị elu na 2018
HTC ga-ebupụta HTC U12 + naanị na njedebe dị elu n'afọ a. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ maka 2018 nke gụnyere ịgbanye naanị ekwentị dị elu.
Telegram mmelite mbipute 4.8.5 dị iche iche na ozi ọma
Telegram mmelite mbipute 4.8.5 na-eweta ọtụtụ ndozi. Chọpụta karịa gbasara ndozi na-abịa na ngwa izipu ozi na mmelite ọhụrụ a.
Galaxy S9 na S9 + ga-enwe nkwado maka eziokwu gbasaa ARCore
Galaxy S9 na S9 + ga-akwado eziokwu ARGore bara ụba. Chọpụta karịa gbasara ọkwa ọkwa gọọmentị na eziokwu eziokwu Google na-abịa na njedebe Samsung.
Vivo V9 bụ ọkwa gọọmentị ugbu a, ndị a bụ nkọwa ikpeazụ ya na atụmatụ ya!
Vivo na-enye Vivo V9, ọnụahịa nke na-abịa na imewe ihe yiri nke iPhone X a ma ama, mana, na mgbakwunye na nke a, ọ na-abịa na ọtụtụ elele nke, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ igwe na-enweghị ego ndị ọzọ nwere otu ọkwa. Anyị na-agbasawanye gị!
Nyocha Cubot X18 Plus
Nyocha nke CUBOT X18 Plus, smartphone nke jikọtara igwefoto Sony 20 + 2 Mpx na ihuenyo 5,99 nke nwere ike nke ihe nhazi egosipụtara nke nwere 4 GB nke RAM na nchekwa nke 64 GB.
Samsung Exynos 9610: Nhazi ahụ nke na-eweta ọgụgụ isi maka oke etiti
Exynos 9610: Nhazi ohuru maka uzo di elu. Chọpụta ihe banyere ihe nhazi ọhụụ sitere na akara Korea nke na-ewetara ọgụgụ isi ọgụgụ isi na ekwentị kachasị elu nke Samsung.
Lytro: Teknụzụ ga-enyere aka melite igwefoto Pixel
Lytro: Teknụzụ nke Google zụtara. Chọpụta ihe banyere teknụzụ nke ụlọ ọrụ ahụ zụtara na ọ na-ekwe nkwa itinye ya na mpaghara dịka eziokwu dị elu na nke mebere na igwefoto Pixel.
WhatsApp ga-abịa Nokia 8110 ọhụrụ na ndị ọzọ na - abụghị smartphones
WhatsApp ga-ebuputa ekwentị maka Nokia 8810. Chọpụta karịa maka ngwa izipu ozi iji kụrụ ekwentị dịka Nokia ọhụrụ.
Anyị na-ewetara gị Meizu E3, ụlọ ọrụ ọhụụ dị n'etiti etiti
Zute Meizu E3, mkpanaka nke na-abịa na atụmatụ ndị agbadoro anya na mpaghara nke ọkara chọrọ, nke ihuenyo 6-inch, isi asatọ dị elu SoC, na ncheta RAM na-emesapụ aka bụ akụkụ nke ọtụtụ na-eche. Anyị na-agbasawanye gị!
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Vivo X21, ekwentị ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Zute Vivo X21, smartphone nke anyị ga-ekwu maka nke na-esote, nke ahụ na-abịa na nnukwu ngosi 19: 9 nwere akara ngosi dị n'elu, yana atụmatụ ndị ọzọ dị n'ime ga-etinye ya na esemokwu dị n'etiti. ha ji ọkara ụkwụ zọọ elu nke gam akporo.
BQ na-ewepu ndị ọrụ nrụzi ya na ọkara n'otu ERE
BQ na-ewepu ndi oru ya na ERE. Chọpụta ihe banyere ihe mere a manyere ụlọ ọrụ Spanish ịbelata ndị ọrụ ya.
Ihe oyiyi ọhụrụ nke Xiaomi Mi Mix 2S
Egosiputa nhazi nke Xiaomi Mi Mix 2S na onyonyo ohuru. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị elu nke akara ndị China nke a ga-ewepụta n'oge na-adịghị anya na nke anyị maraworị ezigbo atụmatụ ya.
iLA Silk, ekwentị mkpanaaka na ọnụahịa nkọwa
Zute iLA Silk, igwe na-abịa na ngosipụta dị oke mkpa n'ihi imepụta ya na aluminom na-egbuke egbuke na azụ, yana akụkụ ole na ole na-akwado ihuenyo 5.7-inch. Ekwentị a nwere SD430 SoC, 4GB RAM, yana 64GB nke ebe nchekwa dị n’ime.
E gosipụtara nkọwa ndị mbụ nke Galaxy J7 2018
Egosiputa nkowa mbu nke Galaxy J7 2018. Chọpụta ihe banyere ekwentị Samsung ọhụrụ nke ga-akụ ahịa n'izu ole na ole sochirinụ.
Edeputara ọnụahịa nke Huawei P20 na Huawei P20 Pro
A kpughere Huawei P20 na Huawei P20 Pro ọnụahịa. Chọpụta ihe banyere ọnụahịa ndị akwụgoro maka ekwentị ndị dị elu nke akara ndị China.
Helio P60 bụzi gọọmentị: Ihe nhazi ọhụụ ọhụrụ
Helio P60: Ihe nhazi usoro ohuru ohuru site na MediaTek. Choputa ihe banyere ihe omuma ohuru nke ohuru nke egosiputara n'ihu oru ma buru onye nhazi kacha mma.
Blackshark, ezigbo Xiaomi mobile maka ndị na-egwu egwuregwu, ka edozi na Geekbench
Xiaomi Blackshark, ọnụahịa nke emebere maka ndị na-egwu egwuregwu, nke na-abịa na Qualcomm SD845 SoC na 8GB nke RAM nchekwa, ka edere na Geekbench, akara ngosi nke nwere ezigbo aha na ndekọ ndekọ nke anyị nwere ike ịtụkwasị obi na oke ebe anyị Akananam ọkpọn̄ nnyịn idiọk. Anyị na-agwa gị nkọwa!
Akwụchara WhatsApp na Facebook maka ịghara ịgbaso Iwu Nchedo Data
Facebook na WhatsApp kwụrụ euro 600.000 na Spain. Chọpụta karịa gbasara mma ụlọ ọrụ abụọ ahụ natara na mba anyị maka ịsọpụrụ Iwu Nchedo Data.
Huawei P20 Lite adịworị ire ere na fortali maka euro 369.90 na ndị a bụ nkọwa ya
Huawei P20 Lite adịworị maka ire ere na fortali maka obere ego nke euro 369, ọ dịkwa na Poland na ihe dị ka euro 380 na mgbanwe ahụ. Ọnụ ọgụgụ a nwere ọtụtụ ihe ndị ahụ e kwuru n'elu, dị ka ọkwa. Chọpụta!
Nkọwapụta nke Vivo V9 zuru ezu na saịtị gọọmentị tupu ya amalite
Vivo V9 e leaked tinyere ya niile data na ụlọ ọrụ ukara website. N'ime njirimara anyị nwere ike ịkọwapụta nke kachasị dị n'etiti, anyị na-ahụ ihe nhazi Qualcomm SD626, nnukwu ihuenyo 6.3-inch, na atụmatụ ndị ọzọ. Chọpụta!
Ekwentị 10 kachasị ike nke February 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
AnTuTu na-ewetara anyị ndepụta nke ọdụ ike kachasị ike n'ahịa n'ọnwa n'ọnwa, nke, n'oge a, anyị nwere ike ịchọpụta na enweghị Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8 na ngwaọrụ ndị ọzọ anyị ga-eche ga-apụta ogo a mana ọ bụghị otu a. Anyị na-agbasawanye gị!
Gọọmentị Finland zụtara 3,3% nke Nokia
Gọọmentị Finland na-azụ 3,3% nke mbak Nokia. Chọpụta karịa banyere gọọmentị Nordic na-azụ mbak nke ga-enyere aka bulie ụlọ ọrụ ahụ.
Ọrụ Internetntanetị Google na-akwụghị ụgwọ rutere Mexico
Stationlọ ọrụ Google, ọrụ ntanetị n'efu nke Google abatala na Mexico ebe anyị nwere ike ịchọta njikọ Wi-Fi na ọnụ ọgụgụ ụgbọ oloko, ụgbọ ala na ebe ịzụ ahịa.
Vivo V9, atụmatụ, igba egbe video na ndị ọzọ leaked oyiyi
Anyị nwere atụmatụ nke Vivo V9, vidiyo vidiyo nke ụlọ ọrụ wepụtara, na onyogho ndị ọzọ leaked.
YouTube maka gam akporo na-amalite inwe ọnọdụ gbara ọchịchịrị
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa YouTube maka gam akporo ụbọchị ndị a. Chọpụta karịa maka mmelite nke ọhụụ a na-ewetara anyị na ngwa a ma ama ụbọchị niile.
Leaked imewe na ọhụrụ data banyere LG G7
LG G7: Leaked imewe na ụfọdụ n'ime ya nkọwa. Chọpụta karịa banyere akara ekwentị dị elu nke a na-atụ anya ka ọ kụọ ahịa n’isi nso.
Nokia 9 nwere ike tinye ihe mmetụta na akara mkpisiaka n'okpuru ihuenyo ahụ
Nokia 9 nwere ike ịnwe ihe mmetụta na akara mkpisi aka na ihuenyo ahụ. Chọpụta karịa ihe abụọ dị iche iche ekwentị a na-atụ anya iji tinye aka.
Xiaomi Mi 7 ga-eji ọkwa dị ka ngwa ngwa ya
Xiaomi Mi 7 ga-abịa na ọkwa ya na ihuenyo ya dịka Mi Mix 2S ga - abịa, nke a bụ n'ihi ọtụtụ koodu faịlụ na - egosi na ngwaọrụ a ga - abịa na ọkwa na ihu ihu 3D, na mgbakwunye na ikwenye ọtụtụ ndị ọzọ nkọwa. Anyị na-agbasawanye gị!
Motorola kwadoro na a ga-enwe ụdị ọhụụ n'ụdị Moto Z
Motorola ga-ebupụta ụdị ọhụụ n'ụdị Moto Z. Mgbe ụbọchị ole na ole nke asịrị gasịrị, akara ahụ na-egosi na a ga-enwe ekwentị ọhụrụ n'ime oke ahụ.
Leaked oyiyi nke Vivo V9 na-egosi abụọ n'azụ ese foto na borderless ihuenyo
Izu ole na ole mgbe ọ malitere, Vivo V9 na-egosi ụfọdụ atụmatụ ya site na foto ole na ole.
Xiaomi Mi6 Nyocha
Nyocha zuru ezu nke Xiaomi Mi6. Nyocha nlezianya vidiyo nke ihe karịrị 49 nkeji eserese nke m na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji kpebie ịzụta otu n'ime njedebe ndị a nke ndị China.
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ ya na Madrid na March 17. Chọpụta ihe banyere imeghe ụlọ ahịa nke atọ nke akara ndị China na Madrid nke a ga-eme n'izu na-abịa. Akara ndị China na-agbasi mbọ ike n'ahịa Spanish
Xiaomi Mi Mix 2S ga - enwe ọkwa na akuku aka nri dị ka vidiyo a
Xiaomi Mi Mix 2S ga-abịa na ọkwa dị na nri aka nri dịka ọhụụ ọhụrụ ahụ. Ekwenyela nke a n'oge na-adịbeghị anya na vidiyo nke anyị hụrụ onye ọrụ na-eji ya. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịmasị oke mmiri na arụmọrụ ya. Chọpụta!
Ugbu a ihe karịrị iri abụọ gam akporo na-emepụta ihe depụtaghachiri iPhone X, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ọ ga-apụ n'anya n'afọ ọzọ.
Huawei na-eweta ọgụgụ isi na ala dị n'etiti. Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ na otu ha chọrọ iji ya.
Nokia sonyeere gam akporo Enterprise na-atụ aro mmemme
Nokia ghọrọ akụkụ nke gam akporo gam akporo akwadoro. Chọpụta karịa maka akara ahụ banye na asambodo azụmaahịa azụmaahịa maka ekwentị.
Xiaomi kwadoro nnweta nke Xiaomi Mi MIX 2S maka Machị 27
A ga-egosi Xiaomi Mi MIX 2S na March 27. Chọpụta ihe banyere mwepụta na ngosi nke ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China
Huawei P20 Lite bịarutere TENAA wee nye anyị nkọwa ndị ọzọ banyere nkọwa ya
Huawei P20 Lite abanyela na njikwa na onye nyocha TENAA gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya ọtụtụ atụmatụ na nkọwa akọwapụtara na mbụ. Anyị na-enye gị nkọwa!
Nomu M6, igwe na - eguzogide ọgwụ na - enweghị atụ na ụdị na enweghị atụ
Zute Nomu M6, ama na-eguzogide ọgwụ nke nwere ọtụtụ uru ga-enye anyị ohere iburu ụbọchị dị jụụ kwa ụbọchị na-enweghị ịchụ àjà niile atụmatụ nke smartphone chọrọ iji kwado ọrụ anyị kwa ụbọchị.
Ihe onyonyo nkwado nke usoro Huawei P20 na-ekpughe igwefoto azụ atọ na ihu ihu ihu
Onyonyo nkwado ọhụụ nke usoro Huawei P20 na-egosi nhazi nke igwefoto azụ atọ.Ọ ga - abụ ihe mejupụtara nke ngwaọrụ ndị a?
Ihe ndekọ ọdịyo ahụ na-erute Facebook
Facebook ga-egosiputa ihe edeturu. Choputa ihe banyere ihe ohuru na abia na netwok nke gha eme otutu okwu.
A ga-enye Honor 7C nke a na-esote March 12
A ga-enye Huawei Honor 7C onyinye a na March 12 site na ụlọ ọrụ China. Emere ka amara nke a site na nsị na-adịbeghị anya nke anyị nwere ike ịhụ nha ihuenyo na ụbọchị ngosi nke anyị na-anọghị ebe dị anya, kama ọ bụ naanị ụbọchị ise. Chọpụta!
Nokia ga-ewepụta ekwentị ndị ọzọ dị elu n'afọ a, Nokia 8 Pro na Nokia 9
Nokia 8 Pro na Nokia 9: Ọgbara ọhụrụ ọhụụ Nokia nyere. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị elu nke akara ahụ na-ebupụta na 2018.
A na - ekpughere iche iche Oppo R15 na R15 Dream Mirror Edition na - ekele TENAA
Nkọwapụta na njirimara nke Oppo R15 na Oppo R15 Dream Mirror Edition, mmadụ abụọ nke elu-etiti dị nso, ka edepụtara n'oge na-adịbeghị anya, nke ọtụtụ nkọwapụta na atụmatụ awụpụla ekele TENAA. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Xiaomi Mi 6 na Xiaomi Mi MIX 2 ga - enweta ihu ọma n’oge na - adịghị anya
Ihu ihu na-abịa na Xiaomi Mi 6 na Xiaomi Mi MIX 2. Chọpụta ihe banyere ọrụ ọhụrụ ahụ na-abịakwute ekwentị abụọ nke akara ndị China.
Amazon ịkwụsị ire smart ngwaahịa si Google akwu nkewa
Onye e-commerce ahụ ga-akwụsị ire igwefoto na thermostats nke ụlọ ọrụ Google, Nest, ebe ọ bụ asọmpi sitere na ngwaahịa ama ama nke Amazon.